Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2772 - 2773 | XperimentalHamid
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2772 - 2773
Funda Isahluko 2772 - 2773 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
“Master, uhlelo lwethu lomndeni wesibhakela lwangaphakathi lunesidingo esikhulu samazinga okushisa nezinto zokwelapha,”
Kusho uRom ephendula umbuzo kaCharlie. Ngokuyinhloko yakhiwe yizidakamizwa eziqinisa i-qi, kanye nezinto zokwelapha zokuqinisa umzimba, njenge-ginseng, i-Ganoderma lucidum, i-velvet antler, ne-cordyceps sinensis.
Eminye imishanguzo yamaShayina esetshenziselwa ukugeza okugeza okwelapha ngokuyinhloko inesibopho sokuqinisa umzimba. ”
“Umndeni wethu unemiyalelo emibili, omunye ubizwa ngeBukisan, kanti omunye ubizwa ngeXentel, uBukisan wenziwe ngezinto zokwelapha eziyigugu ezifana ne-ginseng neGanoderma ngendlela ehlukile, kanti umuthi wendabuko waseChina owenziwe ngokubilisa uzogcwalisa i-qi, igazi, namandla angaphakathi ngemuva kokuphathwa ngomlomo, ukuze kuthuthukiswe amandla angaphakathi futhi kuthuthukiswe ne-meridia, ”kusho uRom.
"Ngokuqondene neXentel, kuyisiphuzo esenziwe ngemithi ehlukahlukene yamaShayina abantu abacwilisa kuyo ukuqinisa amathambo nemisipha yabo nokwenza ngcono amandla abo wonke."
“Usebenzisa malini-ke wonke umndeni wakho ezintweni zokwelapha inyanga ngayinye?” Kubuza uCharlie.
"Esikhathini esedlule, ukutshalwa kwezimali kwethu bekusezingeni eliphakeme, okungenani ama-yuan ayizigidi ezingama-20 kuye kwangama-30 njalo ngenyanga," kuchaza amaRom ngokuxhamazela, "ngokuyisisekelo, singaqinisekisa ukuthi wonke amalungu omndeni wezobuciko bokulwa azothola i-powder enguBuqisan kanye i-Xantel powder njalo ngenyanga, noma ngazimbili kuya kwezintathu uma i-Body Decoction iyinto ebalulekile yokuqeqesha. ”
“Kodwa-ke, njengoba isimo sezezimali somndeni singekho esimeni esincane,” kusho uRom futhi wathi, “ubaba wanqamula okwesikhashana imali eningi eyayisetshenziselwa ukwelashwa ngoba isimo somndeni sezimali sasinzima kancane.”
“Okwamanje, izindleko ezilinganiselwayo zenyanga zokwakha zokwelapha zingaba yizigidi ezintathu noma ezinhlanu zama-yuan; iningi lamalungu omndeni aneziqu ezijwayelekile awasakwazi ukuthola izinto zokwelapha; kunezinto ezimbalwa kuphela zokuqeqesha, ezingasetshenziswa kalula, kepha izinto zokwelapha zehlisiwe kakhulu, futhi ukusebenza komuthi kuyancipha ngokwemvelo. ”
“Unjani umphumela wezinto zakho zokwelapha ezimbili?” UCharlie wabuza futhi.
"Empeleni, noma ngabe izinto zokwelapha aziphungulwanga, umphumela awunamandla kakhulu," kusho uRom ngokungenakusiza,
“Ikakhulu ngoba imiphumela yemigomo esiyisebenzisayo icishe ibe maphakathi, nokulahleka kwezinto zokwelapha kukhulu. Abantu bangabona imiphumela esheshayo, kodwa kulabo asebevele benesizinda esithile sokuqeqeshwa, umphumela kungathiwa umaphakathi kuphela. ”
“Uma kukhulunywa ngemiyalelo kadokotela, kwenzeka ukuthi ngibe nephilisi elingathuthukisa amandla omzimba angaphakathi nangaphandle. Mina uqobo ngicabanga ukuthi iphilile kakhulu, kepha anginasiqiniseko sokuthi kufanelekile yini. Inhliziyo engaphakathi yomndeni wakho, Madam He, ungazama lo muthi noRuoli, ”kusho uCharlie ngokuthula.
UCharlie wakhipha amaphilisi amabili okonga igazi, asindisa inhliziyo ephaketheni lakhe ngenkathi ekhuluma.
Lolu hlobo lwephilisi alubalulekanga kangako kuye. Angayicwenga ngamanani amakhulu uma edinga.
Lolu hlobo lwephilisi alunamthelela omncane kumuntu ofana noCharlie, kodwa lunomthelela omkhulu kuzakhamizi ezejwayelekile.
Uma umuntu ehlushwa yi-hemiplegia ne-high paraplegia, zombili ezingalashwa ngalo muthi.
Abantu abajwayelekile bangakhuphula kakhulu impilo yabo ngokomzimba ngokuyithatha, enenzuzo yokwelula isikhathi sokuphila ngezinga elithile.
Lesi sidakamizwa sinezici eziphawulekayo zokwelapha. Amandla angaphakathi ngokuqinisekile ayi-panacea ongeke ucabange ngayo ngabasebenza ubuciko bempi njengoRom neRuoli.
Ayikwazi ukuqinisa umzimba kuphela nokuqinisa ama-meridians, kepha futhi ingakhulisa kakhulu amandla wangaphakathi.
Njengo-Aoxue ekuqaleni wayethembele ekongeni igazi, iphilisi elisindisa inhliziyo, futhi amandla akhe athuthuka ngokushesha esikhathini esifushane.
Usuke ekubeni ngemuva kahle kuka-Ito Nanako wamdlula ngephilisi elilodwa kuphela. Lokhu kukhombisa ukuthi lolu hlobo lomphumela lungasebenza kanjani kubaculi abajwayelekile bezempi.
Amandla kaRuoli neRom angabonakala kuCharlie. Noma bephezulu emndenini wezobuciko, basampofu, futhi abakwazi ngisho nokufika etafuleni.
Ngenxa yalokhu, umphumela wendlela yomndeni we-He tonic kumele ube mncane, futhi ungaze weqe ngisho inkulungwane eyodwa yaleyo yephilisi elisindisa igazi elisindisa inhliziyo.
Ngenxa yalokho, wayenamasu ekhanda lakhe.
"Umndeni wakwaSu awukaze uyisebenzise le mali phambilini ukuthenga umndeni wakwa-He?"
“Bese ngizoshintsha inkambo yami namuhla!”
“Ukubopha kakhulu umndeni wakwa-He, ngizosebenzisa imali njengomphelelisi nomuthi njengensika enkulu!”
“Umndeni awufuni ukuhlakulela amakhosi amaningi?” "Ingakunika kanjani izigidigidi eziyishumi ngonyaka ngohlelo lwakho lwamanje lodwa?"
"Noma ngivumela abantu badle i-ginseng nsuku zonke, kanjani-ke?"
"Ukusebenzisa leyo ndlela yokufaka izinto zokwelapha, noma ngabe ikuphi, umphumela awufani neze nephilisi lami elonga igazi!"
"Ngemuva kokuzibonela ngawami imiphumela yamaphilisi asindisa igazi asindayo, ngikholwa wukuthi umndeni wakwa-He uzokubheka njengokujwayelekile!"
"Ngaleso sikhathi, enginakho ukukwenza nje ukunikeza umndeni wakwa-He amaphilisi ambalwa minyaka yonke, futhi wonke umndeni wakwa-He uzobe ulangazelela ukungilandela!"
URom naye akazi ngemizwa kaCharlie.
Lapho ebona uCharlie ekhipha amaphilisi amabili wawanika yena nendodakazi yakhe, wahluleka ukuzibamba wabuza, “Master, singavele siphuze lo muthi manje?”
"Yebo," kusho uCharlie, "lo muthi wenziwa ngefomula ekhethekile, uyancibilika emlonyeni bese umphumela ukhishwa kalula, ayikho imiphumela emibi enobuthi, futhi ungawazama khona manje."
Ngaphandle kokuthi amaRom akazi nakancane ukuthi leli philisi linamandla kangakanani, uqinisekile ukuthi uCharlie ngeke amlimaze noma uRuoli, ngakho-ke wathi ngaphandle kokungabaza,
“Ngiyabonga, Master, bese ngizozama!”
Afake umuthi emlonyeni ngaphandle kokunanaza emva kokukhuluma.
URuoli akazange akucabange kakhulu waze wagwinya lo muthi.
Bobabili bathukile ukuthola ukuthi ngemuva kokuphuza leli philisi, lincibilika njengama-ice cubes emanzini ashisayo bese liphenduka libe uketshezi olungena emzimbeni.
Lokhu ngukuhlangana kukamama nendodakazi okokuqala ngalolu luzwa, ngakho-ke kuyaqondakala ukuthi kuyajabulisa.
Iphilisi lihlanjululwa kusetshenziswa inqubo echazwe ku- "Nine Profound Heaven Classics," yize lingaphumeleli njengePilisi Lokuvuselela. Ihlukile kuwo wonke amanye amaphilisi emithi yamaShayina ngokwemvelo kuleli phuzu.
Amanye amaphilisi abiliswa ngezindlela ezejwayelekile, bese kuthi umhlanganiso obilisiwe nodaka kuguqulwe kube amaphilisi we-wax, okwenza kube nzima ukugwinya. Lapho esegwinyiwe esiswini, amaphilisi ayezogaya kancane bese ekhipha umuthi isikhathi eside.
Ngakolunye uhlangothi, amaphilisi kaCharlie ayehlukile.
Ukungena kwephilisi kuguquka kube yimfudumalo egeleza ibe ngumzimba, bese umuntu ezwa amandla angaphakathi amsulwa ngokumangalisayo aqhakaza ngokushesha kuma-meridians omzimba!
Umama nendodakazi abakaze babone amandla angaphakathi anamandla futhi ahlanzeke kangako. Bonke babengekho ebhalansi.
AmaRom abengowokuqala ukuphaphama. "Ruoli, la mandla angaphakathi atholakala ephilisi ayamangalisa ngendlela emangalisayo, yiqondise masishane ukuze isebenze esifundeni, futhi ungadlali ngaleli thuba elihle kangaka!" ebabaza, ehluleka ukulawula injabulo yakhe yangaphakathi.
Amandla angaphakathi angaqhutshwa emzimbeni yibo bonke abasebenza ngobuciko be-karate abenza uhlelo lwangaphakathi lwenhliziyo yomndeni, futhi bayazi ukuthi bangaludlulisa kanjani kuma-meridians omzimba nase-dantian.
Ukuthi nje amandla angaphakathi abaculi abalwa empini ayadabukisa, njengokuqoqa amazolo otshanini emaqabunga njalo ekuseni ngoba inani lincane kakhulu kangangokuba iconsi ngalinye libonakala libaluleke kakhulu kubo.
URuoli neRom bebelokhu befana, basebenza kanzima nsuku zonke ukusebenzisa amandla amancane angaphakathi, bondla futhi bathuthukisa amandla abo kancane ngesikhathi, futhi ushintsho beluhamba kancane.
Ngakolunye uhlangothi, iphilisi likaCharlie elisindisa igazi nelisindisa inhliziyo, lalifana nemvula emizimbeni yabo, futhi namandla angaphakathi aqeda ukuqonda kwabo ngokuphelele!
URom uze akholelwe ukuthi phambi kwephilisi likaCharlie, ifomu Yakhe eyigugu kakhulu ihluke ngokuphelele odakeni, futhi akufanele ukushiwo!
Uma iphilisi likaCharlie liqukethe ibhomu elinamandla elinamandla, i-qi isakazeke phambi kwalo, okungcono kakhulu, kumane nje kungukugcotshwa izingane ezingalinga ukuzibamba ngezandla bese zisusa isikhali
Noma kungahlanganiswa amabhiliyoni ayisigidi noma ayizinkulungwane eziyishumi e-Buqisan Powder, behluleka ukuqhathanisa nephilisi likaCharlie!
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2774 - 2775